म्याराडोनाले पद त्याग्ने | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अमेरिकी पोर्न (ब्लु) फिल्ममा नेपाली युवती
अविवाहित रोनाल्डो बाबु बने →
Posted on 05/07/2010 by शिव पौडेल | १ टिप्पणी
जोहानसबर्ग/ विश्वकप फुटबलको क्वाटरफाइनलमा जर्मनीबाट ४-० को हार बेहोरेपछि अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक डिएगो म्याराडोनाले पद त्याग्ने मनसाय बनाएका छन्　। केपटाउनमा अकल्पनीय हार आत्मसात् गर्नुअघि अर्जेन्टिनाले चारै खेलमा शत प्रतिशत नतिजा निकालेको थियो　। जर्मनी प्रशिक्षक जोचिम लोजका युवा स्टार थोमास मुलर तथा मिरोस्लाभ क्लोजको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अर्जेन्टिना आफ्नो पुरानो प्रतिद्वन्द्वीसँग घुँडा टेकेको थियो　।
टोलीलाई क्वाटरफाइनलको यात्रा गराउँदासम्म समेत म्याराडोना आलोचनाका पात्र बने　। दोस्रो चरणमा मेक्सिकोविरुद्ध जित हात पार्दा म्याराडोनाको चौतर्फी विरोध भएको थियो　। व्यावसायिक फुटबल जीवनकै एक नम्बरको आलोचक ब्राजिलियन महान् खेलाडी पेलेले समेत म्याराडोना पैसाका लागि अर्जेन्टिनी फुटबल सम्हाल्न आएको बताएका थिए　।
सन् २००८ को नोभेम्बरमा म्याराडोना अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षकमा चयन भएका थिए　। ‘दक्षिण अफ्रिकाबाट भोलि (सोमबार) प्रस्थान गर्दै छु,’ सन् १९८६ पछि उपाधि दिलाउने अभियान टुटेपछि म्याराडोनाले भने, ‘घरमा गएर विश्लेषण गर्छु　। हामीले कहाँनेर गल्ती गर्न पुगेछौँ　।’
अर्जेन्टिनी जनतासमक्ष दिइएको वाचाअनुसार आफूले काम गर्न नसक्दा अत्यन्तै दुःखी भएको बताउँदै उनले भने, ‘मलाई अहिले सबैभन्दा डर अर्जेन्टिनी जनतासँग छ　। समस्त घरेलु समर्थकसँग माफी माग्छु　। र, सोमबार घरमा पुग्दा उनीहरूको कस्तो प्रतिक्रिया हुनेछ　।’ जर्मनीसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भइन्छ भनेर कहिले नसोचेको उनले बताए　।
‘यति ठूलो अन्तरमा अर्जेन्टिना हार्छ भनेर सोचेकै थिएन,’ उनले भने, ‘मेरो खेल जीवनमा यसभन्दा दुःखको क्षण कहिले आएन　।’ निराश हुँदै बाहिरिने क्रममा जर्मनी समर्थकबाट प्रयोग भएको शब्दबाट आफू झनै निराश भएको उनले बताएका छन्　। शंकी तथा रिसाहा म्याराडोनाले ती जर्मनी समर्थकसँग केहीबेर वादविवादसमेत गरेका थिए　।
यता टोलीका डिफेन्डर ग्राबिएल हेन्जले म्याराडोनाले तत्काल पद त्याग्न नहुने धारणा अगाडि राखेका छन्　। ‘म्याराडोनाले अहिले निर्णय लिनुहुँदैन,’ हेन्जले भने, ‘टोली निर्माणका लागि उनले धेरै योगदान दिएका छन्　। महान् खेलाडीको उपस्थितिमा खेलाडीको आत्मबल उच्च हुन्छ　।’
One response to “म्याराडोनाले पद त्याग्ने”
Reshma | 05/07/2010 मा 2:00 अपराह्न |
अर्जेन्टिना हारेर के भो, नेपाललाई जिताउन सकिन्छ नि
By Salokya, on July 4th, 2010
ब्राजिल र अर्जेन्टिना त हार्‍यो, तर नेपालले जित्‍न सक्नेछ। सुनको डल्लो कप हैन, गरिब र असहायलाई शिक्षाको सुनौलो घाम दिलाउने काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, मात्र केही मिनेट खर्चेर फेसबुकमा भोट गर्नु पर्नेछ।
यस वर्षको एस‌एलसी परीक्षामा ६४ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए। प्रथम श्रेणीमा पास हुने त ३५ प्रतिशत मात्र। चापागाउँको ज्योतिदय विद्यालयमा भने शतप्रतिशत उत्तीर्ण भए त्यो पनि ३ वर्ष लगातार। यस वर्ष सबै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा पास भए। स्थानीय युवाले आफ्नो गाउँमा गरिब र असहाय विद्यार्थीहरूसँग गुणस्तरीय शिक्षा पुर्‍‌याउन सुरू गरेको यो विद्यालय नेपालको लागि नै नमूना हुनसक्छ। मुनाफारहित सहकारी विद्यालयको रूपमा खोलिएको यो विद्यालय न त सरकारी हो न त नाफामुखी निजी। नितान्त सेवा भावले खोलिएको ज्योतिदय सहकारी विद्यालयमा स्थानीय बालबालिकाहरू कम शुल्कमा पढ्छन्, नसक्ने सित्तैमा।
स्थानीय युवाहरूको प्रयासमा चलेको यो विद्यालयलाई अब तपाईं पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ज्योतिदय स्कूललाई दीगो रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको सर्वोदय नामक सामाजिक संस्था अहिले फेसबुकको एक प्रतियोगितामा सहभागी छ।
अमेरिकाको चेज बैंकद्वारा सञ्चालित फेसबुक प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने संस्थाले २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। सर्वोदय, नेपालका कार्यकारी निर्देशक शिशिर खनालले भने- यो रकम पाएमा हामी नेपालमा स्कूल भवन बनाउन प्रयोग गर्ने थियौँ। सबै पैसा त्यसैमा खन्याउने हैन, स्कूलको भवन निर्माण गर्न स्थानीय स्रोतको भरपुर प्रयोग गर्ने थियौँ।
एनजीओको नाम आउने बित्तिकै हामी मध्ये अधिकांशको नाक खुम्चन्छ। अरुबाट पैसा लिने अनि त्यसको सानो अंश खर्च गरेर आफूहरु मोटाउने! उनीहरुले त पाउँछन्, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? हाम्रो सोच त्यसरी विकास भइरहेको छ। यो संस्था के अर्थमा फरक छ त? खनाल भन्छन्- महात्मा गान्धीको विचारबाट उत्प्रेरित सर्वोदय, नेपालमा अहिंसात्मक तथा दीगो विकास प्रवर्द्धन गर्नका लागि खडा गरिएको नेपाली संस्था हो। यो संस्था शत प्रतिशत स्वयंसेवामा चल्छ। आफू ’roundका र छरछिमेकलाई सहयोग गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने सोच “सर्वोदय” को मूल मन्त्र हो। गान्धीको यही सर्वोदय दर्शनबाट प्रभावित भएर श्रीलंकामा ‘सर्वोदय श्रमदान’ नामको दीगो विकाससम्बन्धी आन्दोलनले निकै सफलता पाएको थियो।
यो संस्थाका ’boutमा थप जानकारी चाहिए शिशिर खनाललाई skhanal@gmail.com मा सम्पर्क राख्‍नसक्नुहुन्छ।
अहिले सर्वोदय फेसबुक प्रतियोगितामा ४ हजार ७६० मतका साथ आठौं स्थानमा रहेको छ। पहिलो स्थानमा रहेको हिथर अन अर्थ म्युजिक फाउन्डेसन इन्कको भोट १० हजार २ सय छ। टप टेनभित्र परिसकेको सर्वोदयलाई अब माइसंसारका पाठकहरुको साथ चाहिएको छ। तपाईँले केही मिनेट खर्च गर्नुभयो भने यो गौरव हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ।
पहिला यहाँ क्लिक गर्नुहोस्